Imandarmedia.com.np: प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिदै प्रचण्डले के के भने ? (हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्ण पाठ)
Big News, Political » प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिदै प्रचण्डले के के भने ? (हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्ण पाठ)
प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिदै प्रचण्डले के के भने ? (हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्ण पाठ)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार अपरान्ह सिंहदरबारबाट देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।